Huawei wuxuu hadda ka shaqeynayaa laba kiniin oo cusub | Androidsis
Huawei wuxuu ku shaqeeyaa kiniinno cusub oo leh kamarad dhan 48 MP
Eder Ferreño | | Huawei, Kiniiniyada Android
Toddobaadkan dhammaadkiisa waxaa lagu dhawaaqay in Huawei loo caleemo saaray sidii sumadda kiniiniga Android ee ugu iibinta badan adduunka en rubuca koowaad ee sanadka. Sidan oo kale, soo saaraha Shiinaha ayaa kujira magaca labaad ee adduunka. Waxay ku guuleysteen inay kala saaraan Samsung, taas oo ahayd sumadda ku adkaatay Android illaa hadda. Intaa waxaa dheer, waxay u muuqataa in soo saaraha Shiinaha uu horeyba uga shaqeynayay kiniinno cusub.
Warka wanaagsan ee shirkadda Huawei, oo timaadda ka dib markii ay ogaatay in sidoo kale iibinta taleefannadooda casriga ah ayaa kordhay rubuca koowaad ee sanadkan. Marka sanadka sifiican ayuu kubilaabmay. Sumadda Shiinaha ayaa hadda haysata ugu yaraan laba kiniin oo horumarin ah, taas oo xog ah durba soo socota.
Waxay u muuqataa in nooca Shiinaha uu ku shaqeynayo laba kiniin oo loogu talagalay dhammaadkiisa sare. Maaddaama la og yahay in labadoodaba ay la imaan doonaan Kirin 980 oo ah processor-ka. Waa processor-ka aan ku haysano Huawei P30. Marka waxay la imaan lahaayeen awood. Marka la eego cabirka, mid wuxuu lahaan lahaa shaashad 10,7-inji ah tan kalena cabirkeedu yahay 8,4-inji.
Kiniinkan 10,7-inji ah ayaa sidoo kale la filayaa inuu leeyahay batari awooddiisu dhan tahay 7.500 Mah. Halka nuuca kale uu la imaan doono 4.200 mAh oo batteri ah. Waxa xiisaha leh ayaa ah in labadoodaba ay ku imaan doonaan kamarad awood leh. Sababtoo ah waxay lahaan lahaayeen kamarad 48 MP ah. Maxaa intaa ka badan, labada xaaladoodba wuxuu noqon lahaa aaladda Sony IMX586taas oo ah tan ugu awooda badan arimahan waxayna siinaysaa 48 MP run ahaan.
Wixii hadda faahfaahin dheeri ah lagama helin labadan kiniin ee Huawei. Sumadda Shiinaha ma xaqiijinin wax rasmi ah. Laakiin sanadkaan, kiniiniyada cusub waa inay yimaadaan, dhexdooda MediaPad. Ilaa iyo sanadkaan wax kiniin ah ma haynin xilligan.
Marka waa inaan in yar ka sugno arrintan. Xaqiiqdii mar dhow ayaa xog cusub laga heli doonaa kiniiniyadan cusub Huawei. Calaamadda Shiinaha ayaa hadda ah iibiyaha ugu sarreeya qaybtan, ugu yaraan rubuca hore. Marka xaqiiqdii waxay raadinayaan inay kobciyaan iibiyadan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Huawei » Huawei wuxuu ku shaqeeyaa kiniinno cusub oo leh kamarad dhan 48 MP
Xiaomi waxay ka furaysaa dukaankeedii labaad Talyaaniga
Nokia 4.2 ayaa toddobaadkan ka bilaabi doona dalka Hindiya